Siyaasigee ugu horreeyn doona inuu siyaasadda Soomaalida ka hufo halka meel ee ay HOOGTEY?! + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Siyaasigee ugu horreeyn doona inuu siyaasadda Soomaalida ka hufo halka meel ee...
Siyaasigee ugu horreeyn doona inuu siyaasadda Soomaalida ka hufo halka meel ee ay HOOGTEY?! + Sawirro
(Hadalsame) 21 Maajo 2022 – Dagaalka ka socda dalka Yukreyn wax uu dadka ku baraarujiyay gaajada ku dhici karta dadyowga dambeeya haddii dagaal weyni dunida ka dhaco ama baduhu xidhmaan. Yukreyn oo ka mid ah dhawrka dal ee u gu horreeya dhoofinta qamaddida (burka), intii dagaalku ka socday qamaddidu dunida aad bay u qaaliyowday.
Dalalka Carabta iyo Afrika oo u gu badan kuwa qamadiddada/burka soo dhoofsadaa wax ay la legdamayaan sidii ay gaajo u ga badbaadi lahaayeen. Laakiin Soomaalidu ku ma baraarugsana, waayo wax ay is ku hallaynayaan in marka gaajo ku dhacdo gaaladu u soo gurman doonto.
In kasta oo dhulka Soomaalida badankiisu ku habboon yahay beerashada, haddana wax la sheegi karo la ga ma beero. Weli loo ma gudbin siyaasad, maalgelin, aqoon iyo qalabka casri ah oo wax la gu beero, inta badanna yaambadii iyo dibigii baa la wadaa.
Kumanyaalka arday ee sannad walba jaamacadaha ka qalinjabiya khuraafaad baa la baraa ee la ma baro aqoonta nolosha sida beeraha, xoolaha, farsamada iwm. Sideedaba dadka ka taliya dhulalka Soomaalidu haddii ay wax caqli ah iyo wax akhlaaq ah lee yihiin maanta ka ma ay shaqeeyeen wax aan ahayn sidii loo soo saari lahaa cunto iyo biyo.
Daar kasta oo uu siyaasi tuug ahi dhistay, gaadhi kasta oo si carruurnimo ah lacagta umadda loo gu soo gatay iyo Dollar wal oo bangi la gu shubtay wax ay goyn lahaayeen qalabka beeraha ee casriga ah, waxaana la gu soo saari lahaa raashin badan.
W; Q: Ibraahim Hawd-yuusuf
Previous articleArrin ay sameeyeen balse eedeen dhallinyaradii horay uga tirsanayd nidaamka degaya oo looga digayo kuwa iman doona
Next article”Waa musallifney” – Ruushka oo dharbaaxo kulul oo aarsi ah ku dhuftay shirkadda Google oo horay u qaniintey